Ngaba uyazi indlela yokwenza i-backlink kwi-SEO indlela enokwenzeka ngayo?
Akukho mfuneko yokuthi yonke i-webmaster kunye nomnini-shishini webhishini kufuneka azi indlela yokwenza i-backlinks kwi-SEO-ngokupompa ithrafikhi ephezulu yewebhu, kwaye ekugqibeleni uzuze kwindawo ephezulu yokuma kwi-SERPs. Kodwa yintoni eyenza iphrofayili ye-backlink ye-backlink yonke iwebhusayithi okanye iblogi? Ukubeka iliso kunye nolwazi olufanelekileyo, ukuqinisekiswa, kunye neenkqubo zokulungisa ngokukhawuleza ukwenzela ukuba i-backlink yexabiso eliyintloko ilawulwe ngokugcwele ukuze ihlaziywe rhoqo kwesaziso esifutshane. Ngendlela elula, emva kokuba i-backlink iqale ukulahlekelwa ixabiso layo, kufuneka libuyiselwe ngokukhawuleza okanye lisuswe ngokukhawuleza. Ngoko, njani ukwenza i-backlinks kwi-SEO? Masijamelane nayo - oku kuya kuba yinkqubo eqhubekayo - puff pera baratos chile. Kuthatyathwe kwisikali, idibanisa iindlela eziqhelekileyo zokwakha izakhiwo kunye nokugcinwa rhoqo kunye neshedyuli yokuhlola rhoqo.
Yintoni eyenza i-backlink efanelekileyo
Ngaphambi kwayo nayiphi na into, yonke i-backlink "enhle" (ngaphandle koko, yendalo okanye i-organic) kufuneka ivela kwiiwebhsayithi zangempela, iiblogi , okanye nayiphina imithombo ye-intanethi. Okulandelayo, umthombo we-backlink efanelekileyo kufuneka ube neengqiqo ezifanelekileyo kwi-PR (pagerank), i-DA (igunya lesizinda), kunye ne-PA (igunya lephepha). Emva koko, wonke umviwa ofuna ukudibanisa kunye (nokuba yiwebhsayithi okanye iblogi) kulindeleke ukuba abe nomxholo wekhasi ozwakalayo, okhupha ixabiso langempela ukuhlala kubasebenzisi.
Ngokufanelekileyo, umxholo onjalo kufuneka uthande ukwamukela ukwabelana kwimidiya yoluntu. Ndiyathetha ukuba loo mibhalo ebhaliweyo yombhalo kufuneka ibhekiswe ngokugqithiseleyo ngokubalulekayo-ubuncinci ukuhlala ngaphandle kokhuphiswano - kwiimagrafu ezithatha amehlo kunye neenkcukacha, iishati, i-infographics, ispredishithi, okanye nayiphina indlela yokubonakalisa ukubonisa yonke into elula ngendlela ecacileyo. Ngendlela, ukubuyisela umxholo wakho wesiqhelo kwinto ethile yomsebenzisi-nobomi kunokuba nesigqibo esifanelekileyo kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi. Ngoko, utyalomali ixesha kunye nomgudu wokubuyisela ubuncinci umxholo omde kakhulu, okanye mhlawumbi inxalenye eyona nto ibaluleke gqitha ukuba ifunde kwaye ibambe. Ngaloo ndlela, ngezinye izinto ezinobungqina bokuba ngumsebenzisi kwaye ngoko "kulula ukugaya" umxholo awukwazi kuphela ukuvelisa i-backlinks, izabelo, ukuthetha, ukukhokelela kunye nokubhaliselwa - kodwa ukupompa ithrafikhi enye yewebhu emva kwayo yonke.
Indlela yokwenza i-Backlink kwi-SEO
incike kwisicwangciso sokwakha isiqhagamshelo esenziwe kakuhle;
uzama ukusebenzisa amava amahle kakhulu ekuthengiseni idijithali;
ube neshedyuli yokuhlola rhoqo ukujonga i-backlinks yakho - zombini ubuninzi kunye nokuqhagamshela umgangatho wepropati;
bhala amanqaku abavakalisi okanye izithuba zeblogi ukuba zipapashwe kwiindawo ezithile ezigunyazisiweyo zenkampani yesithathu;
zijongene newebhusayithi ezihloniphekileyo kuphela okanye iiblogi, ezifanele zihambelane ngokusisigxina sakho soshishino, i-niche yemakethi, okanye ubuncinci kwicandelo leshishini elihlangeneyo.
Phakathi kweentlobo ezicebileyo zophando lwe-backlink kunye nezixhobo zokucebisa, ndavavanya i-Semalt Analyzer (Semalt), i-Open Site Explorer (Moz), kunye ne-Majestic SEO toolkit kwi-ecommerce yebs. Emva kwakho konke, kukuphela kwakho ukugqiba indlela yokwenza i-backlink kwi-SEO, kwaye yiyiphi ithuluzi le-intanethi yokuzama kuqala. Ekugqibeleni, ungalibali ukuba izikhonkco zakho ezisanda kudala zingabonakala zingenakunceda ngokupheleleyo. Ewe, kunikezelwa ukuba uya kudibanisa newebhusayithi okanye iblogi, encinci ngokwamanqanaba angama-SEO kunokuba wakho.